ဗိုလ်တထောင်တစ်ဖက် ကမ်း ကနေ လာကာ နေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင် ဇင်ယော်စာလေ းတွေ လာရောင်းနေတဲ့ ၇၅နှစ်အရွယ်အဘွားအိုကို အလှူငွေထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိုးစက် – XB Media & News
ဗိုလ်တထောင်တစ်ဖက် ကမ်း ကနေ လာကာ နေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင် ဇင်ယော်စာလေ းတွေ လာရောင်းနေတဲ့ ၇၅နှစ်အရွယ်အဘွားအိုကို အလှူငွေထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိုးစက်
eleGabarပရိသတ်ကြီးရေလတ်တလောမှာပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေရရင်ရသလို ပြုလုပ်နေသူတွေ ထဲမှာ လူ ရွှင်တော်မို းစက်လည်းအပါ အဝင်ပါပဲနော်။ အဘက်ဘက်ကစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ကာလကြီးမှာ စီနီယာဆရာသမား တွေကိုရတဲ့ဘ က်ကအကူအညီတွေပေးနေတဲ့အပြင် ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပြင် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတစ်ချို့ကို နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့ပေးတတ်သူပါ။
ဒီနေ့မှာလည်း ”ဇင်ယော်စာလေးတွေကိုဗိုလ်တထောင်တစ်ဖက်ကမ်း ကစ်စမိုင်းကျေးရွာမှဗိုလ်တ ထောင် ကမ် းနာ းအထိ လာရောင်းနေတဲ့အသက်(၇၅) အရွယ် အဘွားဒေါ်စန်းကြည် ။ဒီနေ့ညနေစောင်းမှ ဗိုလ်တထောင်ကမ်းနားကိုအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တေ ာ် နဲ့ ဆရာဦးသျှန်ထွဏ်းရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဇင်ယော်လေးတွေအိပ်တန်းတတ်ပြီမို့တစ်ခြားဈေးသည် လေ းတွေလဲ မရှိတော့ပါဘူးအဘွားဒေါ်စန်းကြည်ကတော့ ဝယ်သူမဲ့ ဈေးသည်တွေကို မျှော်နေတုန်းပါဘဲ။
“ဇင်ယော်တွေလဲ မရှိတော့ဘူး…တစ်ခြားအစာရောင်းတဲ့သူတွေလဲ သိမ်းကုန်ပြီအဘွား မပြန်သေးဘူးလား…???”တစ်ယောက် ၊ နှစယော က်များ ဝယ်ဦးမလားလို့ပေါ့ သားရယ်…”သားအကုန်လုံး ဝယ်ပေးမယ်လေ…”တက ယ်လား သားကျေးဇူးပါ သားရယ် အဘွား ဟိုဘက်ကမ်းကို စောစောပြန်လို့ရပြီပေါ့..အဘွားလျော့ပေးမယ်နော်”လျော့မပေးပါနဲ့ အဘွားရယ် အဘွားကို ၅သေ ာင်းကန်တော့လိုက်မယ်နော်ဇင်ယော်စာလေးတွေလဲ အဘွားနောက်နေ့ပြန်ရောင်းပေါ့…”ကျေးဇူးပါဘဲ သားရယ်…”ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အလှူလေးအထမြောက်ခဲ့ပါပြီ။
အခုပိုစ့်လေးကို ဖတ်မိသူ မိတ်ဆွေများဗိုလ်တထောင်ကမ်းနားရောက်ရင်ဝယ်ယူအားပေးကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်းပါရစေဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်လှူဒါန်းကြသူများကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ကူ ညီနေကျ အတိုင်း နေပူ မရှောင်မိုးရွာမရှေ ာင်အသက်မွေးဝမ် းကျေ ာင်းပြုနေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို နိုင့သလောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြန်တာပါ။သဒ္ဓါတရားကိုအရင်းခံကာ ပရ ဟိတအလှူတွေ ပြုလု ပ်နေတဲ့မိုးစက်ရဲ့အလှူတွေအတွက်သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးCeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ။
ပန်ဆယ်လို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ပေး ဆ ပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများ.
ေအးျမတ္သူ ရင္ဖြင့္လာတဲ့ ခုလက္႐ွိအေနအထားရဲ႕ အထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ